Warshad Noocyada Boorsada - Soosaarayaasha Noocyada Boorsada Tayada Sare, Soo-saareyaasha
Nooc boorso oo isu-eg, dhaqaale, iyo caan ah oo noqon kara mid il-qabad ku leh sawirada saxda ah. Lagu dabaqi karo ku dhowaad dhammaan warshadaha iyo codsiyada.
Qaar badan oo ka mid ah soo saareyaasha cuntada ee hormuudka ka ah suuqa adduunka ayaa mar horeba isticmaalaya Mashiinka Baakadaha ee loo yaqaan 'GAOGE GPB Rotary Pouch Packaging' si ay ugu xirxiraan alaabooyinkooda yaryar / waaweyn ee la shiidan yahay iyo kuwa budada ah si ay u buuxiyaan boorsooyinka istaagga oo ay u istaagaan boorsooyinka leh jiinyeer.
Boorso istaag ah oo salka laaban iyo geesaha laydhka leh oo lagu qalabeyn karo nidaamyo dib u soo celin ah, astaamo shaqeynaya iyo qaabab kala duwan oo loo yaqaan 'raster' iyo goynta. Mashiinnada baakadaha ee taagan waxay u oggolaanayaan shaabadaha isweydaarsiga (xitaa geesaha) in loo qaado abuurista bacda. Dooro ikhtiyaarka ugu fiican baahiyahaaga.
Habka boorsada ee muujinta istaagga. Wejigeeda ballaadhan wuxuu ku fiican yahay calaamadaha iyo sawirada, wuxuuna yeelan karaa shaabad dhexe ama mid ka baxsan oo toosan oo loogu talagalay sawirada xagga hore iyo xagga dambe. Ku habboon ku dhowaad dhammaan warshadaha.
Boorso barkimo leh dhinacyo isdaba-joog ah oo lagu sameeyay GAOGE mashiinnada baakadaha toosan ee ka yimaada kuleylka ama duuba duubo filimka duubaya. Boorsadu waxay ku habboon tahay in lagu rakibo noocyo badan oo alaab ah oo ku jira illaa 60 litir.